”Ri waliba shilalka ay is dhigto lagu qalaa!” | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Ri waliba shilalka ay is dhigto lagu qalaa!”
”Ri waliba shilalka ay is dhigto lagu qalaa!”
(Hadalsame) 13 Sebt 2020 – Maxaa la ga wadaa murtida ah “Ri waliba shillalka ay is dhigto ayaa la gu qalaa”?
Shillalku waa meesha marka neefka la qalayo hilibkiisa la gu googooyo. Badanaa geedo gaagaaban amaba la soo guray baa dhulka la dhigaa dabadeed neefka la gu dul qalaa si ciidda loo ga ilaaliyo korna loo gu soo qaado. Haddaba ridu sidee bay shillalka la gu qalayo iyadu isu dhigtaa?
Waxaa la ga wadaa ri waliba sida ay tahay naf ahaanteeda ayaa sabab u noqota in la qalo, goorta la qalo iyo cidda loo qalo. Tusaale ahaan haddii ay dhalayso, haddii ay irmaan tahay, haddii ay tahay mid caano badan, haddii ay tahay ceesaan qurux badan oo mustaqbal wacan la ga filayo, dheeldheel la gu ma qalo.
Sidoo kale haddii ay tahay caato aan macayn ama hilib yar sabab qiimi leh loo ma qalo.
Bal se haddii ay tahay abeer aan dhalin oo aad u cayilan, ama tahay dhalmaddays hilboon, ama tahay candhoole ama gabno aan waxarteeda korsanayn, markaa goorta u gu horraysa ee hilib loo baahdo iyo sababta ku habboon baa loo bireeyaa.
Qofka sidaa loo gu maahmaaho waxaa la lee yahay “qofka aad adigu tahay ama sida aad iska dhigtay baa keentay in sidaa la guu la dhaqmo”.
Previous articleArrin lala yaabban yahay oo kasoo korortay kiiskii kufsiga & dilka ahaa ee Muqdisho
Next articleShirka Madaxtooyada & Maamullada oo maalintii 2-aad galay (Qodobbada isku qataaran)